TAMAANDHADA CHERRY: BEERAHA DAAQADA AMA BALAKOONKA - BEER CAGAARAN
Koraaya yaanyada cherry maanta ayaa noqday waxqabad caan ah.
Laakiin sida loo koro yaanyada cherry at guriga on windowsill iyo heli goosashada miro, ma qof kasta ogyahay.
Macluumaadka ku saabsan beerashada iyo daryeel dheeraad ah mucjiso yar yar ayaa lagu soo bandhigay maqaalkan.
Waa maxay noocyo of yaanyo cherry ku haboon yihiin sii kordhaya on windowsill ah
Si loo daryeelo dhirta ayaa ku habboon, oo baadiyaha ma u xanuunsanayn meel bannaan, waa inaad doorataa noocyo hooseeya. Ka mid ah noocyo of yaanyada cherry, ku habboon koritaanka guriga on windowsill, gaar ahaan caan:
"Florida Petit" - horaantii dhexdhexaad ah, baadiyaha ilaa 30 cm sare, miraha casaanka ee casaanka leh ee culeyskiisu yahay ilaa 40 g;
"Micron NK" - hore, kora ilaa 15 (!) Cm, miraha waa casaan iyo jaalle ah oo miisaankoodu yahay ilaa 20 g, dhexdhexaad ah dhererka maalinta iftiinka oo u dulqaadanaya qabow qabow;
"Mucjisada Balcony" waa noocyo badan oo hore u kalluumeysi ah, baadiyaha illaa 45 cm oo sare, waxay ku siisaa 2 kg oo yaanyo ah xilli kasta. kuwaas oo sidoo kale ku habboon ilaalinta;
"Qabsooma ee sonkorta" - bilawga hore, mid go'an, geedka koraa ilaa 30 cm, waxay u adkaysaa dabaylo goor dambe;
"Kabaha caleenta" - yartahay koraya, tufaaxa oo leh miraha oo miisaankeedu yahay ilaa 20 g, waxay u muuqdaan kuwo dherer leh;
"Pinocchio" - kala duwanaan xilli-dhexaad ah, marar dhif ah kor ayey ka koreysaa 30 cm.
Bacriminta sidoo kale waxay xaqiijiyeen naftooda, waxay leeyihiin dhowr ah faa'iidooyinka: biqilka, caabiga cudurada iyo cayayaanka, wax-soosaarka sare. Beelaha noocan oo kale ah "F1 Balconi Red", "F1 Pearl", "F1 Pearl", "F1 Bonsai Micro", "F1 Balconi Yellow" waxay ku habboon tahay koritaanka guriga.
Ma taqaanaa? 100 g yaanyo cherry ah waxaa ku jira qiyaasta maalinlaha ee fiitamiinada A, B, C, iyo sidoo kale birta iyo potassium
Xaaladaha cimilada ee yaanyo sii kordhaya
Tamaandhadu waa dhir aad u sarreeya, si ay u abuuraan jawi wanaagsan oo ay horumarinayaan oo si fiican u miro dhalaan, dadaal waa in la sameeyaa si loo ilaaliyo heerkulka, qoyaanka iyo iftiinka.
On windowsill waxaad qabanqaabin kartaa beerta oo dhan oo khudrado khudradda: dill, dhir, cilantro, basil, arugula, sage, bacari, thyme, chabra, tarragon, marjoram, kalluunka liin.
Tamaandho waxay jecel yihiin hawo cusub oo diiran. Sidaa darteed, qolka ay koraan waa in si joogto ah loo duubo (doorbiday ka dib markii waraabiyo). Waa lagama maarmaan in la ilaaliyo heerkulka maalintii waxay ahayd 25 ° C, iyo habeenkii 18 ° C. Ilaa iyo inta ay yaanyo yiraahdo ubaxin oo aan midho dhalin, waxaa suurtogal ah in lagu hayo heerkulka 2-3 ° C ee hoose. Waa suurad wacan in qoyaanka uusan ka badnayn 65%.
Sidee loo doortaa iftiinka daaqa hodan ah
Tamaandho waa mid aad u fudud-u baahan. Waxba kama baqanayaan qorraxda tooska ah, laakiin waxay ka jirtaa iftiin la'aan: cagaha si adag ayaa loo soo saaraa oo xitaa jiifsan kartaa. Sidaa darteed, ee beerista ee cherry waxaa haboon in la doorto daaqadaha ama balakoonnada soo wajahda koonfurta ama koonfur.
Sheyda ayaa looga baahan yahay daaqadaha galbeed ee xagaaga. Haddii iftiinku uusan ku filnayn, markaa waxaad u baahan tahay iftiin badan oo iftiin leh. Maalin iftiin ah oo iftiin ah oo yaanyo ah 13-14 saacadood.
Ma taqaanaa? Yaanyada Cherry waxay bilaabeen inay beeraan bilowgii qarnigii XIX ee jasiiradda Santorini ee Badda Aegean.
Waa maxay carrada si ay u beerto yaanyada cherry
Waayo, yaanyada cherry ee ku habboon ku habboon ciidda dabacsan. Diyaarso sida geedo yaanyo ah, tusaale ahaan, isku dar ah humus, peat, ciid iyo dhul sodan oo ah saamiga 1: 1: 1: 1. Dhulka beerta ee ku habboon iyo bacriminta leh ee dheeraadka ah ee ash qoryaha iyo peat.
Beeritaanka beerto ee xaaladaha gudaha
At home, yaanyada lagu beeray karaa waqti kasta oo sanadka - ka duwan beeritaanka beerta, aad u dhowaan kuma koobna cimilada. Waxa kaliya ee lagama maarmaan ah in la tixgeliyo haddii aad rabto inaad hesho miraha cusub ee cusub miiska sanadka cusub, markaa waa inaad bilowdaa geedo Sebtembar.
Xulashada awoodda, ciidda iyo diyaarinta abuurka
Si aad u hesho goosashada qani ku ah, awoodda ay duurka u koraan waa inay noqdaan mugga ugu yaraan 4 litir.
Waa muhiim! Xididdooyinka yaanyada ma jecla biyaha taagan, sidaa daraadeed waa lagama maarmaan in la siiyo biyo-daadin adoo ku shubaya dhoobada dhoobada iyo ciidda hoose ee dheriga.
Haddii dhul beerashada laga soo saaro dhul furan, markaa waxa haboon in la daadiyo biyaha karkarinta jeermiska. Si ujeedadaas oo kale, miraha waxaa lagu daaweeyaa xal daciif ah oo ah Kansarro.
Beeridda yaanyada ee dheryaha
Ka dib marka la shaqeynayo, miraha waxaa la geliyaa maro qoyan, daboolay oo ka tagay halkaas ilaa jeermiska uu muuqdo. Miro geedaha ayaa lagu beeray weelasha yar yar ee loogu talagalay geedo (tusaale ahaan, koobabka la tuuro) si qoto dheer wax ka badan 2 cm oo ay ku daboolaan filim si ay u abuuraan saameyn aqalka dhirta lagu koriyo.
Wakhti ahaan u samee hawada iyo waraabinta. Ka dib geedo helay xoog iyo sprouts leeyihiin laba caleemo run ah, waxay yihiin transplanted galay dheriyo diyaar u, qanjaruufo ee xariiqda dhexe si ay u kiciyaan jeexjeexin nidaamka xididka.
Xeerarka daryeelka ee yaanyada cherry ee dheriga
Daryeelka loogu talagalay yaanyada yaryar ee guriga yaryar waa wax yar oo ka duwan beerashada noocyo kale oo dalagga ah, laakiin wali waxay leedahay sifooyin gaar ah oo ku haboon.
Sida loo yareeyo yaanyada cherry
Noocyadaasi waxay jecel yihiin qoyaan, laakiin waa inaad iska ilaalisaa in aad qallajiso ciidda. Waraabinta waa ka fiican habeenkii biyo diirran. Haddii ay dhacdo cimilada daruuriga ah, waraabinta waa ka fiican tahay. halve. Ka dib markii la waraabiyo, ciidda waa la furfuray si kor loogu qaado hawada hawada ilaa xididada.
Waa muhiim! Waraabinta xad dhaafka ah waxay halis gelineysaa horumarinta cudurrada fangas: muuqaalka koofiyadu ama dabaylo goor dambe.
Inkasta oo ay jirradu tahay in la quudiyo xayawaanku waxay noqon kartaa mid aad u weyn, dhexdhexaadin waa in la fiiriyaa. Bacriminta fosiga ah ee faytamiin iyo potassium ayaa ka caawin doona dhirta si ay ula qabsadaan tiro badan oo ah ubax iyo ugxan. Bohrrrrrrrrrrrhoono dheeraad ah ayaa waxay horseedi doontaa koritaanka degdegga ah ee cagaarka cagaarka si loo yareeyo ubaxa iyo horumarinta miraha. Waxaad ku daadi kartaa tiro yar oo qoryo qoryo ah - waxaa ku jira potassium, fosfooraska iyo waxyaabo kale oo raad raac ah.
On windowsill waxaad sidoo kale kori kartaa khudradda iyo saladh dalagyada: qajaarka, basbaaska yar, salaar, salad barafka, barkada, isbinaajka, basasha cagaaran.
Tilmaamida diirinta yaanyo
Qaar badan oo bannaanka u khibrad badan ayaa aaminsan in si loo helo goosashada qani ku ah, yaanyada waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo, taas oo ah, in la xoqdo geeddi-socodka marxaladdaha.
Dhanka kale, dhirta guriga waxay leeyihiin hawl madax-bannaan. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo waxoogaa isdhexgal ah oo u dhaxeeya muujinta iyo waxtarka.
Ma taqaanaa? Canab Tomato waa la rujin karaa ka dibna beeray. Si arrintan loo sameeyo, jilbaha jajaban waa in la geliyaa galaas biyo ah iyo dhibco bacrimin ah oo ubax ah. Xididdadu waxay soo muuqan doonaan usbuuc gudaheed, bil ka dib marka ay beerto waxay barareysaa.
Qaar ka mid ah soosaarayaasha isbaarooyinka ayaa muujinaya in noocyada kala duwan aysan u baahnayn in la nadiifiyo, tusaale ahaan, "F1 Balconi Red" iyo "F1 Bonsai Micro".
Yaanyada Cherry: goorta la beeri on balakoonka ama windowsill
Tamaandhada guryaha waxay noqon kartaa miro ilaa 5 sano, si kastaba ha ahaatee, dhalidda ugu badnaan waa la bixiyaa marka hore 2 sano.
Waxaa lagula talinayaa in laga saaro midhaha miraha si loo fududeeyo horumarinta kooxaha soo socda. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah bannaanka u khibrad leh waxay ku andacoodaan in yaanyada, kuwaas oo si buuxda u kallifay baadiyaha, waa wax aad u adag.
Ogow khudradda jamacada asaasiga ah ee cherry.
Kobcinta yaanyada cherry ee yaryar ee loggia, balakoonka ama windowsill ma aha shaqo adag. Laakiin sida shaqo kasta oo dalka ah, waxay u baahan tahay fiiro gaar ah iyo jacayl, taas oo ay si cad ugu mahad celin jirtay miraha caafimaad leh oo caafimaad leh.